Ejipta · Avrily, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Avrily, 2018
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Avrily, 2018
Tatitra avy amin'ny Fihaonan'ny Bilaogera Jôrdaniana
Bahrain 25 Avrily 2018
Tsy fantatrao mihitsy izay olona hipoitra any amin'ny fihaonanà bilaogera. Tsy vitan'ny hoe lasa sasany amin'ireo bilaogera tsara indrindra ao Jôrdania fotsiny ny fihaonan'ny bilaogera Jôrdaniana - ezaka iraisan'ny Jordan Planet/Global Voices - fa lasa kintana goavana avy ao Bahrain sy Egipta ihany koa.
Egypta: Nogadraina Indray Ireo Bilaogera … Ary Navotsotra
Fahalalahàna miteny 19 Avrily 2018
(Marihina fa tamin'ny 4 Aprily 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy) Amin'ny toe-javatra izay lasa mahazatra ankehitriny, bilaogera Egyptiana malaza miisa roa, niaraka tamin'ny mpisolovava iray mpiaro ny zon'olombelona no notazomina am-ponja ary navotsotra avy eo. Bilaogera iray hafa ihany koa no nantsoina an-telefaonina mba ho tonga tany amin'ny...
Ejypta: Bilaogera very asa noho ny famoahany ny mahasandoka ny tantaran'ilay fitaovana maha-virjiny hosoka
Shina 19 Avrily 2018
Nanomboka nanontany tena ny Ejiptiana raha hanomboka hanafatra Hymen Shinoa i Ejypta ary voaraoka kosa i Amira Al Tahawi, izay niara-niasa tamin'ny Radio Netherlands tamin'izany fotoana izany noho ny famoahana fa lainga ny tantara hymen Shinoa.
Ejypta: andeha tifirina ireo mpanao fihetsiketsehana!
Fahalalahàna miteny 17 Avrily 2018
Raha niresaka momba ny fihetsiketsehana miverimberina sy ny fihetsiketsehana manohana ny demokrasia faha-6, voatsikera ireo mpikambana ao amin'ny Antokon'ny fitondrana (NDP) ao amin'ny Parlemanta nandritra ny fifamaliana teo amin'ny solombavam-bahoaka mpirahalahy Miozolomana sy ny mpanao hetsi-panoherana tao amin'ny firenena.
Fahalalahàna miteny 16 Avrily 2018
Afovoany Atsinanana: Sombiny Amin'ny Eid
Koety 14 Avrily 2018
Ho an'ireo Miozolomana an-tapitrisany manerantany, fotoana ho amin'ny fankalazana, fiarahan'ny fianakaviana sy fandinihana momba izany ny Eid Al Adha. Ity sombiny amin'ireo fanehoan-kevitry ny bilaogera ao Tonizia, Koety, Ejypta, ary Tiorkia.